6 data rakakosha kutora chinzvimbo mumusika wemasheya | Ehupfumi Zvemari
6 data rakakosha kutora chinzvimbo mumusika wemasheya
Hapana mubvunzo kuti basa rekutenga masheya mumisika yemari rinoda kuedza kushoma padivi revashambadzi vadiki nepakati. Uku kuita kusingafanirwe kusiyiwa kune kusagadziriswa nekuti mari zhinji iri panjodzi mumhando iyi yekutengesa masheya. Chero kusarongeka kunogona kuita mutsauko wemamiriyoni mazhinji uye chokwadi chekuti kuvhiya kunobatsira kana kwete. Beyond imwe nhevedzano yehunyanzvi yekutarisa iyo ichave iri nyaya yechimwe chinyorwa.
Imwe yenguva dzakakosha kwazvo muzviito zvevatengesi inguva yekutenga zvikamu. Izvo zvakakosha kwazvo kugadzirisa mitengo nekuti iro ramangwana purofiti yesitoko inotsamira pazviri. Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kuziva kuti ndeapi matunhu ekutenga, nekuti mutsauko uripo pakati pavo unowanzoenderana. Nemitengo misiyano inosvika ku3% mune imwechete yekutengesa chikamu. Hapana mhosho dzinogona kuitwa sezvo pakupedzisira ivo vachabhadhara zvakanyanya.
Saka kuti iwe ugone kuita mashandiro mumisika yemari nenzira inogutsa yezvido zvako, tiri kuzokupa kiyi dzemiparamende yaunofanira kuzviseta kubva ikozvino. Ivo vanozokubatsira iwe kukwidziridza iyo sarudzo sezvausingakwanise kufungidzira kubva pakutanga. Izvo hazvizongove zvinoenderana nechimwe chidimbu cheruzivo asi pane akati wandei uye ehunhu hwakasiyana, sezvo iwe uchizokwanisa kuona pazasi. Chero zvazvingaitika, igwaro diki rekukwiridzira kudyara nenzira kwayo chaiyo.
1 Dhata: mutengo wemugove
2 Tarisa mamiriro ekumashure
3 Sector iyo iri yayo
4 Mamiriro emakambani
5 Rarama iyo nguva yekunyorwa
6 Nhoroondo yezvakataurwa newe
Dhata: mutengo wemugove
Chinofanira kuve chekutanga chinhu chaunofanira kutarisa, kuti uone kana mutengo wechikamu uri wakachipa kana unodhura, zvichave zvakafanira kuongorora mabhenefiti ayo kambani inayo. Iwe unofanirwa kuendesa zviito zvako mumisika yequity kuenda kumakambani asina kukosheswa mukugadziriswa kwemitengo yavo. Havasi vese vari mumamiriro akafanana, sezvazviri zvine musoro kufunga, uye nekuda kwechikonzero ichi chiito chekudyara chinofanira kuve chakanyatsofungisisa. Chero zvazvingaitika, haufanire kutenga kuti utenge sezvo zano iri rakareruka rinogona kukutungamira kumamiriro ezvinhu asingadiwe kwauri.
Kune rimwe divi, chokwadi chekuti kambani inotengesa nemari shoma kwazvo hazvireve kuti yakachipa. Kwete zvakati wandei, kana zvisiri izvo zvinopesana zvinoreva kuti iko kukosheswa kunoonekwa nemisika yemari. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti migove pamusika wemasheya inobatwa seimwe pfuma yemari. Ndokunge, nemutemo wekugovera uye wekuda uye ichi chinhu chakaomarara kwazvo kukoshesa mumisika yemari. Muzviitiko zvese, uye kana zvichibvira, unofanirwa kutarisa mikana yebhizinesi inogara ichibuda mumhando iyi yemisika yemari.
Tarisa mamiriro ekumashure
Chimwe chinhu chaunofanirwa kuongorora kuti ugadzire yako inotevera yekudyara portfolio ndiyo tsika yemutengo wemusika wemari. Mupfungwa yekuti iwe unofanirwa kusarudza mafambiro ekuwedzera. Kana iyi iri nzira, hapana mubvunzo kuti uchave nemukana mushoma wekukanganisa kubva zvino zvichienda mberi. Hazvishamise kuti kusimudzira uku ndiko kunokurudzira mitengo kuti irambe ichikwira muzvikamu zvinotevera zvekutengesa. Iri zano rekutanga rekudyara kune chero chimiro mune ino yakaoma nyika yemari.
Chimwe chezvinhu zvakanaka nezvekushandiswa kwesystem ino mukudyara ndechekuti kumusoro maitiro anoonekwa zviri nyore. Ivo vanopa pasina kukahadzika kuburikidza neyakareruka graphic iyo iwe yaunogona kuendesa kubva kune chero yakasarudzika midhiya mune yekudyara chikamu uye zvakanyanya kunyanya mumusika wekuenzanisa. Kunyangwe iwe uchifanirwa kufunga kuti kune kumusoro kumusoro kwemaitiro zvichienderana nemitemo yekugara zvachose. Ndokunge, kune ipfupi, pakati nepakati uye refu uye ndipo paunofanirwa kutsanangudza zvaunoda chaizvo kuita nemari dzako. Mupfungwa iyi, zvakakosha kuti iwe ujekese chimiro chako seanodyara: anochengetedza, wepakati kana ane hasha.
Sector iyo iri yayo
Izvo zvisina kukosha kukosha kuziva chikamu chauri kuzoisa mari yako kubva zvino zvichienda mberi. Zvinoenderana neimwe nhanho pakubatsirwa kwekushanda nekuti mutsauko uripo pakati pavo unowanzove muhombe kwazvo. Panogona kunge paine cyclical, inodzivirira zvikamu kana kusimudzira mashandiro eanofungidzira maitiro. Zvichienderana nezvido zvako, unofanirwa kusarudza imwe kana imwe nekuti maitiro avo anosiyana nekusimba kukuru. Zvakajairika kuti nepo tsika dzebhengi dzichikwira, iwo emagetsi anoderera uye zvinopesana. Neichi chikonzero, kutsvaga chaiko musika wemasheya kunogona kukubatsira kukwidzirisa mashandiro pamwe nekubudirira kukuru.
Ndichiri pane zvinopesana, usakanganwe pasi pechinhu chipi zvacho icho asiri ese masheya ezvikamu anoramba ari pasi pechinhu chimwe chete. Nekuti haina kunyatsoita saizvozvo, sezvinoonekwa muzvikamu zvese zvekutengesa, zvese pasitoko yenyika uye nekunze kwenyika yedu. Pakupera kwezuva izvo zviri kutora danho rauchatora kubva ikozvino zvichienda mberi. Chinhu icho dzimwe nguva chinonetsa kuwana, sevashambadzi vane ruzivo rwakawanda mumisika yemari vanoziva. Hazvishamise kuti panogona kuve nemusiyano wemamiriyoni mazhinji kuburikidza nezviito izvi.
Iyo ndeimwe yematanho asingazivikanwe nevashambadzi vadiki nepakati. Mupfungwa yekuti vanowanzo tenga masheya vasingazive imwe yedhata inokosheswa kukudziridza mari shoma kana shoma. Mupfungwa iyi, hunyengeri hushoma huri mukutarisa makambani ane zvikwereti zvishoma. Ichave pasipoti yekuti maitiro ako ave nani pane mamwe ese. Kunge chinzvimbo chayo pamberi pemakwikwi uye kuti inogona kuburitsa icho chinzvimbo chayo chiri kuita zvishoma kana zvishoma pamberi pekambani dzese dzesangano.
Kune rimwe divi, isu tinofanirwa kunyatsoteerera kwese kwese uko kunotsikiswa mhedzisiro yebhizinesi sezvo vachiwanzo kupa chiratidzo cheapo neapo nezve zvatinofanira kuita. Tichitora zvinzvimbo kana zvichipesana kuva mukuzara zvakakwana senzira yekuchengetedza capital yedu inowanikwa kuita investments. Iri zano rekudyara iro rinonyanya kubatsira kuita yedu mitsara yekuita. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha. Ichi chinhu chausingafanire kukanganwa kuti usaite zvikanganiso kubva panguva dzino chaidzo.
Rarama iyo nguva yekunyorwa
Ehezve, imwe yemaitiro ekushandisa ndeyekuti usarudze masheya ane nguva yakaringana yekubhadharwa. Ndidzo dzinonzi hunhu hunopisa mumisika yemari uye vanogona kukuitira mari yakawanda mumazuva mashoma. Ndokunge, vari panguva chaiyo yekutengwa nekuti kumanikidza kwekutenga kune simba kwazvo uye pamusoro pemutengesi. Iyo iri nyore kwazvo sisitimu yekushandisa kana iwe ukatevera chero nzira dzekutaurirana umo tekinoroji kuongororwa kwakakosheswa kupfuura kwakakosha. Ndokunge, shure kwezvose, chii chinobatanidzwa mukushanda pamwe nekukurumidza kwazvo nguva yekusingaperi kana kunyangwe yemhando yekufungidzira.
Chimwe chinhu chaunofanirwa kufunga nezvacho kuti uongorore zano rakakosha iri nderekuti kufamba uku kupfupi. Uye saka iwe unogona kunonoka kuita kuti zviitwa zvako zvibatsire mumusika wemasheya. Kwete pasina, ndiyo njodzi huru yekushandisa kwayo sezvo uchifanira kunge uchikurumidza kuvhura zvinzvimbo mumitengo inopisa yemisika yekutengesa. Iko zvakajairika kuti iwe unogona kuita iyo isinganzwisisike chikanganiso iyo inokutadzisa iwe kusvika kune ako ekukurumidza zvibodzwa. Naizvozvo, kana ukatadza kukwira mota panguva yakakodzera, zvichave zvirinani kusiya kuvhiya.
Nhoroondo yezvakataurwa newe
Chekupedzisira, zvinobatsira kutarisa nhoroondo yemakotesheni avo nekuti ivo vachapa inopfuura chidimbu chimwe cheruzivo nezve hunhu hwekambani yakanyorwa pane imwe nguva. Iwe unofanirwa kuve nenhoroondo yezvakaitika pane zvawakaita munguva yakapfuura kutsanangura mafambiro emangwana mumisika yemari. Mupfungwa iyi, inogona kukupa iwe ruzivo iwe rwaunoda kuti uzive kana chengetedzo, semuenzaniso, iri mune mamiriro e kusununguka kusununguka kana kudonha. Izvo zvakakosha pakuvhura sekuvhara nzvimbo mumisika yemari.
Kunge mamwe manhamba anoratidzwa mukuongororwa kwehunyanzvi hwechitoro uye izvo zviri kusahadzika vanogona kukubatsira kushandira mari yekudyara nenzira kwayo chaiyo. Beyond imwe nhevedzano yekufunga kweakasiyana kwazvo maitiro, sezvaunenge uchizofunga panguva ino chaiyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » 6 data rakakosha kutora chinzvimbo mumusika wemasheya
Zvakakosha here kutora chikwereti chekudyara?
Amadeus: yakabatana zvakanyanya nekushanya